Laboratory Vagadziri & Vatengesi - China Laboratory Fekitori
Yakaomeswa, compact uye humanized dhizaini, nzvimbo yekuchengetedza. Nyore uye nekukurumidza calibration, kunyatsoita kwakaringana muKufambisa, TDS uye Salinity zviyero, nyore mashandiro anouya neakakwira anovhenekera backlight inoita kuti chimbo ive yakanaka yekutsvagira mudiwa mumarabhoritari, zvigadzirwa zvigadzirwa uye zvikoro.
Imwe kiyi yeku calibrate uye otomatiki kuzivikanwa kupedzisa kururamisa maitiro; yakajeka uye inoverengwa inoratidzira interface, yakanakisa inopesana nekukanganisa kuita, kuyerwa kwakaringana, mashandiro ari nyore, akasanganiswa neakakwira kupenya backlight mwenje;
DO500 Yanyungudika Oxygen Meter
Ipfupi uye yakanakisa dhizaini, kuchengetedza nzvimbo, kunyatsoita, mashandiro ari nyore anouya neakajeka backlight. DO500 isarudzo yako inopenya yezvishandiso zvekushandisa mumarabhoritari, zvigadzirwa zvirimwa uye zvikoro.
PH500 PH / ORP / lon / Temp Meter
Ipfupi uye yakanakisa dhizaini, yekuchengetedza nzvimbo, nyore calibration ine calibrated mapoinzi anoratidzwa, optimum kurongeka, yakapusa oparesheni inouya neyakavhenekerwa kumashure. PH500 ishamwari yako yakavimbika yezvekushandisa nguva dzose mumarabhoritari, zvigadzirwa zvinogadzirwa uye zvikoro.
Electromagnetic Kuitisa Inzwa, Kufambisa TDS Sensor, Ph Sensor Electrode, Chlorophyll Sensor, Titanium Alloy Kuitisa Shungu, Quadrupole Graphite Kuitisa Shungu,